Aqoonyahanad Imaarat ah Oo Shaki Gelisay Qiyaamha! | Xaqiiqonews
Aqoonyahanad Imaarat ah Oo Shaki Gelisay Qiyaamha!
Dad isticmaala Tuwiterka ayaa is dhaafsaday Muuqaal dood dhaliyey oo sida la sheegay ay duubtay gabar imaataart ah.
gabadhan oo lagu magacaabo ” رسل النعيمي” ayaa sheegtay in waxyaabaha lagu beeray quluubta muslimiinta ee ka sheegeynaya qiyaamaha in ay yihiin been abuur,iyadoo intaasi ku dartay in qiyaamaha uu noqon doono maalin tiknoolajiyadeed oo iyada oo kale aan horay loo arag.
waxa ay tiri “sax ma ahan sawirka laga bixiyo qiyaamaha ee ah in ay tahay maalin mugdi ah, dadku is cariirinayaan oo argagax leh” waxa ayna dalbatay in dib loogu laabto waxa ay ugu yeertay “Caqiidooyinka halista ah”.
Saalax bin Cabdilaah bin Cabdilcasiis bin Baaz oo ah wiil uu awoowe u yahay mufitgii geeriyooday ee sacuudiga ibnu baaz ayaa arinta gabadhaasi soo qaatay isaga oo tuwitarkiisa ku qoray ayaad qur’aan ah oo qiyaamaha ka sheegeynaya.
Bishii Maarso ee la soo dhaafay ayaa sidan oo kale aqoonyahanad Imaaraat ah oo lagu magacaabo “موزة غباش ” waxa ay u gaftay kitaabka “صحيح البخاري” iyada oo u ku tilmaamtay “Kibaat Dambeeya”.
Xilliga loo gafayey Kibtaaka Bukhaari waxa ay aheyd xilli loo fadhiyey shir ay isugu imaanayeen haweenka Imaaaraatka waxaana aflagaadada goobjoog ka ah wasiir ka tirsan Imaaraatka Oo lagu magacaabo Nahyaan bin Mubaarak Ala-Nahyaan.